Fikarohana momba ny firaisana Fandrotsaham-bady nateraky ny Revelarnation ny Apôstôly Thomas | Michael Tamura sy Gary Renard - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Fomba fiafarana: Fahatsiarovana an-tsitrapo sy fankatoavana ny tena
Michael Tamura ho teraka tamin'ny fanamboarana ny Apôstôly Thomas
Fantatro ireo mpampianatra ara-panahy Michael sy Raphaelle Tamura nanomboka tamin'ny taona 2000. Michael no mpanoratra Ianao no valiny: Mamantatra sy manatanteraka ny tanjon'ny fanahinao. Nitady ny fanampian'izy ireo aho mba hahatakarako ny fiainako taloha, ary koa ireo andian-jiolahim-bahoakan'ny mpitarika taloha izay hita fa nalaina indray tamin'ny fotoanan'ny Revolisiona Amerikana. Ity tantara momba ny fiainako taloha fony i John Adams dia voarakitra ao amin'ny bokiko, Fiverenan'ny revolisionera. Misy famerenana fohy momba ny raharaha azoko jerena amin'ny: Tranolay Reikarnasan'i John Adams | Walter Semkiw, MD
Nanatrika seminera tsy tapaka aho izay notazonin'ny Tamuras tany amin'ny faritr'i San Francisco Bay. Ao amin'ny famelabelarany dia nizara i Michael fa izy no teraka tamin'ny taonan'ny Apôstôly Thomas.
Na dia vao haingana aza no hitako fa sarotra inoana izany, dia nanontany momba an'io fiainana lasa teo aloha io aho nandritra ny fivoriana iray niarahako tamin'i Kevin Ryerson, izay nanolotra mpitari-dalana iray antsoina hoe Ahtun Re. Niara-niasa tamin'i Kevin sy Ahtun Re aho nandritra ny taona 15. Ny Ahtun Re dia naneho ny fahaiza-manaon'ireo mari-pahaizana momba ny fiainana amin'ny fomba tena marina. Ny asa izay nataoko tamin'i Kevin dia azo jerena ao Fikarohana momba ny Reincarnation Ryerson-Semkiw.
Ahtun Re dia nanamafy fa i Michael dia fampidirana an'i Thomas Thomas
Michael Tamura ho Fampijaliana indray ny Revolisiona Amerikana Roger Sherman
Mikasika ny fahalianana dia nanambara tamiko ihany koa i Tamatoa fa nahatsiaro ho mpikambana ao amin'ny Kongresy Continental izy ary indrindra fa nilaza izy fa tao amin'ny komity voatendry hanoratana ny fanambarana ny fahaleovantena. Tsy fantatr'i Michael manokana hoe iza izy nandritra ny Revolisiona Amerikana. Olona dimy monja tao amin'io komity io, anisan'izany i Thomas Jefferson, Benjamin Franklin sy John Adams. Amin'ireo mpikambana roa sisa ao amin'ny komity, dia nitovy tamin'i Roger Sherman i Michael, izay mpikarakara kiraro, mpamboatra kiraro. Nosoratana ho anisan'ny lehilahy ara-panahy indrindra ao amin'ny Kongresy ihany koa izy. Tao amin'ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin, Ahtun Re dia nanamafy fa i Sherman i Michael.
Rehefa nolazaiko tamin'i Michael mikasika ny maha-izy azy ny fiainany taloha tahaka an'i Roger Sherman, dia nanambara izy fa liana foana amin'ny famolavolana kiraro ary nametraka patanty ho an'ny sandal. Ny iray dia mila miaiky fa ny fahalianana amin'ny famolavolana kiraro dia fialamboly tsy mahazatra ho an'ny mpampianatra ara-panahy.
Gary Renard ho fampianaran'i Jesoa Kristy ho teraka indray
Taona maromaro taty aoriana dia namaky aho, Fahavitan 'izao tontolo izao nataon'i Gary Renard, izay nivoaka voalohany tao amin'ny 2003. Fianarana amin'ny fahagagana dia nisy fiantraikany lehibe tamin'ny fanoratana ny bokin'i Gary. Fianarana amin'ny fahagagana dia nofaritana ho toy ny asa fitoriana izay i Jesoa Kristy no loharanon'ilay fitaovana.
In Fahavitan 'izao tontolo izao, Dia gaga aho namaky fa nilaza i Gary fa izy koa dia ny vatana vaovao indray ny Apôstôly Thomas. Niahiahy aho fa diso i Gary, na mety hizara tranga iray antsoina hoe antsoina hoe Fibaribariana ho an'ny Split aho, izay misy fanahy iray mitoetra mihoatra ny vatana iray isaky ny mandeha. Misy porofo matanjaka izay mitranga ny fisarahana. Ian Stevenson, MD ny Oniversiten'i Virginia dia nantsoina hoe "Fahaizana momba ny fiainana tsy misy fiafarana", izay midika fa misy fifampiraharahana eo amin'ny andiam-piainana roa. Raha te hijery ireo tranga ireo, azafady mankany: Fanangonana ny Fandrikasaboana
Tao anatin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy fa Gary Renard koa dia fampidirana ny Apôstôly Thomas ary i Gary sy Michael dia mizara. Loharanon-kevitra iray ho fanohanana an'io hevitra io dia ny fitoviana mahatsiravina misy eo amin'i Gary sy i Roger Sherman, izay niara-niaina tamin'ny fiainan'i Gary sy Michael. Na dia Japoney aza i Michael, misy ihany koa ny fitoviana eo amin'i Michael sy Gary. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Mariho fa raha Fianarana amin'ny fahagagana dia boky misy fantsona izay misy an'i Jesosy Kristy no mpanoratra, manohy manohana ny asan'i Jesosy i Gary. Toy izany koa, ny boky farany an'i Gary dia Ny mahavelona Raha niara-nanontany ny tsirairay i Jesoa sy i Bouddha.
Ny sombin-tsakafo sy ny toetran'ny olona
Misy fitoviana maromaro ao amin'ny maha-olona sy ny talentan'i Michael sy Gary. Izy roa ireo dia:
Namoaka mpanoratra teo amin'ny sehatry ny ara-panahy
Comedians amin'ny fombany miteny sy fampianarana
Gary sy Michael dia samy nanoratra ny bokiny voalohany tamin'io taona io ihany ary samy nahavita ny bokiny voalohany sivy taona taty aoriana
Samy nahitana soritr'aretin'ny scoliosis izy ireo tamin'ny fahazazany
Fihaonana mivantana: Gary Renard sy Michael Tamura ho Mirror Images
Afaka niresaka tamin'i Michael sy Gary aho tamin'ny farany, araka ny nanombohan'i Gary nanomboka ny daty Cindy Lora, izay fantatro hatramin'ny fotoana nanambadiany voalohany. Cindy dia efa mpanohana efa ela momba ny asa nataoko tamin'i Kevin Ryerson. Cindy no mpanoratra Fianarana momba ny fahasalamana sy ny fahamoram-panahy.
I Gary sy Michael dia nokasaina ho any San Francisco niaraka tamin'io fotoana io ary nandamina anay hanokana sakafo tao amin'ny Beach Chalet.
Michael sy Gary dia nipetraka nifanandrify ary raha nijery azy ireo aho dia toa kambana roa mitovy no mifampijery. Nanaiky an'io fanombanana io i Raphaelle, vadin'i Michael.
Nanaiky i Gary sy Michael fa nisolo azy ireo. Ny tena mahavariana dia i Michael, mpanompo efa notokanana, dia nanolotra ny mariazin'i Gary sy Cindy ary Hawaii. Inona no eritreritr'io zava-nitranga io? Tranonkala mifandraika:
Ireo tranga hafa momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana hafa Fampianarana amin'ny fahagaganaNy mpianatra dia ahitana:
John of the Cross Kenneth Wapnick
Abigail Adams | Marianne Williamson
Fitoviana ara-batana: Misy ny fitoviana amin'ny endriky ny endrika eo amin'i Michael Tamura, Gary Renard sy Roger Sherman. Amin'ny fampitandremana dia azontsika antoka fa fantatsika ankehitriny ny ohatr'i Thomas Thomas.
Fiainana Taloha Taloha: Evanjelista ny Apôstôly Thomas. Nanangana ny kongregasiona maneran-tany i Michael sy Gary. Samy mampiasa vazivazy betsaka izy ireo amin'ny fampitana hafatra. Roger Sherman dia mpandrafitra iray ary i Michael Tamura dia nanana fahalianana manokana tamin'ny fanorenana kiraro.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Raha manaiky ny zavatra niainany taloha, dia fantatro i Michael / Gary tahaka an'i Roger Sherman nandritra ny Revolisiona Amerikana, tahaka ny naha-mpandray anjara anay tao amin'ny Kongresy Continental.
Ny fihenam-bidy: Araka ny voalaza tetsy ambony, dia fantatra ho separatista i Michael Tamura sy Gary Renard. Ny fe-potoana tranainy amin'ity tranga ity dia ny Parallel Lives